दृष्टिकोण – Page 10 – Banking Khabar
‘राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जर नीति अवलम्बन गर्न सक्छ’
चिन्तामणी शिवाकोटी, डेपुटी गभर्नर- लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहक सदस्यहरुलाई सेयर वितरणका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन चौथो लघुवित्त सम्मेलनको घोषणापत्र मार्फत अनुरोध गरेका छन् । यो तत्काल कुनै पनि हालतमा सम्भव नहुने कुरा हो । भर्खरै पारित भएको वाफीयाले यसलाई छेक्छ । वास्तवमा सेयर लगानीको कुरा जायज हो । तर, सेयर खरीदमा विपन्न वर्गको सहभागिता भएको छैन […]
‘विकट क्षेत्रका वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नेछ’
डा. चिरञ्जीवी नेपाल । नेपालको सन्दर्भमा ग्रामिण क्षेत्रका मानिसहरुमा वित्तीय पहुँचको आवश्यकता छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता मानिसहरुलाई ‘तार्गेट’ गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्ना शाखा विस्तार गर्न जोड दिइरहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई स्थापनाको इजाजत दिँदा पनि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा पुग्न नसकेका दुर्गम गाउँमा जान तयार हुनेहरुलाई मात्रै केन्द्रीय बैंकले […]
बजेट कार्यान्वयनको कार्यदिशा (पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतको बजेट विश्लेषण)
डा. रामशरण महत – नेपालमा पुँजीगत खर्च नहुुनुको प्रमुख कारण सुशासनको अभाव हो । हाम्रो एजेन्डा राष्ट्र विकास तथा आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित छैनन् । हाम्रो भाषणमा आर्थिक मुद्धा छ तर प्रथामिकतामा राजनीति छ । सन् १९९० मा दक्षिणी एसियाली देशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी र पूर्वी एसियाली देशको प्रतिव्यक्ति आम्दानीबीचमा ३ सय डलरको मात्रै फरक थियो । […]
‘पाँच चुनौतिको चपेटामा बीमा कम्पनीहरु’
शेखर बराल – १. आम मानिसमा बीमाप्रतिको बुझाई- कतिपय मानिसहरुमा बीमाप्रतिको बुझाई नै गलत पाइन्छ । जसका कारण बीमा गर्न उनीहरु उदाशीन बनेका हुन् । तर पछिल्लो समय यस्तो अवस्था विस्तारै न्युनिकरण हुँदै गएको छ । आर्थिक दायित्वबाट मुक्त हुन र भविष्य सुरक्षित गर्नकै लागि बीमा गर्ने हो भन्ने कुरा मानिसहरुले बुझ्दैछन् । गत वर्ष […]
शरीरको भार गोडासम्म, मर्जरको लहर वडासम्म
प्रा.रामप्रसाद दाहाल – नेपाल राष्ट्र बैंकले जब न्यूनतम चुक्ता पुँजीको व्यवस्थासम्बन्धी नीति ल्यायो, त्यसपछि पुँजी पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जरको लहर नै चलेको छ । ‘मर्जर’ शब्द विशेष गरी बैकिङ्ग क्षेत्रमा ढकमक्क भएर फूलेको छ, तर फल फल्न भने बाँकी रहेको देखिन्छ । अमेरिकी बैज्ञानिक बेन्जामिन फ्राङ्कलिनले भनेका थिए ‘मान्छेलाई बनाउन र पैसाले पैसा […]
बढ्दो अनुत्पादक लगानीले वित्तीय अस्थिरताको खतरा
सुरज घिमिरे – यतिखेर तरलता संकटले गर्दा बैंकहरुबीच निक्षेप तानातानको अवस्था छ । यही होडबाजीले गर्दा मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदर १३/१४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । जसले गर्दा निक्षेपको लागत बढेकै कारण कर्जाको व्याजदर पनि १६/१७ प्रतिशत पुर्याइएको छ । हिजो ६ प्रतिशतको व्याजदर सम्ममा कर्जा प्रवाह हुने कुरा आज सपना जस्तै भएको छ । पुँजी वृद्धिका कारण […]
डि.पि अर्याल – पहिलेपहिले नेपालीहरु विदेश जाने कुरामा धेरै प्रश्नहरु उठाउँथे । विदेशमा आफन्त भएकाहरु मात्रै विदेश जान्थे । अन्यथा कुन देश जाने ? तलव कति आउँछ ? कसरी जाने विदेश ? कसले लैजान्छ ? कति पैसा लाग्छ ? अनि कति आम्दानी हुन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नहरु निकै चल्थे । तथापि, आज परिस्थिति फेरिएको छ […]
वैदेशिक रोजगारको बाढी र लगानी सम्मेलनको तरंग
मधुसुदन पोख्रेल । गाउँ होस् वा सहर पछिल्लो दशकमा वैदेशिक रोजगारमा युवायुवतीहरुको आकर्षण उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गईरहेको छ । स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अभावका कारण देशको अर्थतन्त्र दशकौंदेखि वैदेशिक विप्रेषण आप्रवाहले धानेको तथ्य सबैको सामु छर्लङ्ग छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विपे्रषणको अंश झन्डै एकतिहाइ (३२ प्रतिशत) पुगिसकेको छ । औपचारिक तथ्यांकअनुसार नेपाली श्रम बजारबाट […]
गभर्नर डा. नेपालको चोटिलो विश्लेषण : ‘पैसाको महत्व नबुझ्दा हामी गरीब भयौँ’
कुनै पनि मुलुकका नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग निर्धक्क र खुला रुपमा कारोबार गर्नका लागि प्रदान गरिने चेतना नै वित्तीय साक्षरता हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई एउटा प्रमुख एजेण्डाका रुपमा राखेको छ । सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता खासगरी नेपालको सन्दर्भमा […]
‘सेयर बजारको वर्तमान अवस्थालाई यसरी बुझौँ’
दिलीपकुमार मुनकर्मी – एकै दिनमा आउने ठूलो उतारचढाव र उनीहरूको संस्थागत सुधार, नियामकको अवस्था तथा मुनाफामा प्रगतिले समग्र बजार क्र्यास हो भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन । सेयर बजारमा अहिले क्र्यास र बियरिस निकै चलेका र चलाइएका शब्द हुन् । करिब पाँच वर्षअगाडिदेखि सेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरू र केही वर्ष वा महिना अगाडिदेखि सेयर बजार प्रवेश […]
‘लघुवित्तलाई गलत तरिकाले व्याख्या गरियो’
विष्णु ढकाल – पछिल्ला तथ्याँङ्कहरुले नेपालको झण्डै ३० लाख घरपरिवार लघुवित्त क्षेत्रसँग प्रतक्ष्य आबद्ध रहेको र लघुवित्तमा आबद्ध हुने अधिकांश महिला रहेको देखाएको छ । गरिबी निवारणको प्रमुख अस्त्रको रुपमा संसारभर लघुवित्तलाई हेर्ने गरीएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा समेत लघुवित्त क्षेत्रले गरिबी निवारण गर्न तथा स्थानीय साधन, सीप र श्रोतको परिचालन गर्न, संरचनागत रुपमा आत्मनिर्भर विकास प्रकृयाको प्रवद्र्धन […]
‘राज्यले वातावरण बनाइदिए बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्छन्’
उपेन्द्र पौडेल । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढी प्रवाह गरे भनेर त्यसलाई अस्वभाविक तबरले व्याख्या भईरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा बढाउ भनेर केन्द्रीय बैंकले भन्नुलाई पनि यहाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी बढाएको भनेर उल्टो व्याख्या गरिएको छ । अहिले देशको प्राथमिकता र आवश्यकता के हो भन्ने कुरामा हामी सबै सजग […]
मुद्राको शक्ति र तरलताको समस्या
रामप्रसाद दाहाल- धेरैको हृदयमा गाढिएको पिरतीको खेलाजस्तै लाग्ने मुद्रा वर्तमान जीवनका पाटामा फन्को मारिरहेको छ । शेली गमनले भनेका थिए–‘मुद्रा एउटा त्यस्तो वस्तु हो, जो सर्वमान्य छ ।’ अनि मलाई याद आउँछ, हामीलाई पढ्दा घोकाइएको थोमस, शेली, प्रो. केन्ट, झाउथर, मार्शल आदिका परिभाषाहरु । मार्शलले भनेका थिए–‘मुद्रामा ती सबै बस्तु सम्मिलित छन्, जो कुनै विशेष […]
‘पैसा नेपाली भूमिमै खोजौं’ : लघुवित्तकर्मी उदयराज खतिवडाको बिश्लेषण
आज कर्जा लिन होडबाजी गर्ने धेरै छन् । कर्जामात्रै सबैचिजको समाधान होइन । जव सम्म उद्यमशिलताको विकास हुँदैन तबसम्म त्यो कर्जा बोझ मात्रै हुन्छ । यदी काम गर्छन र कामको सदुपयोगिताका लागि कर्जा लिन्छन भने त्यो चाहिँ फेरी एउटा उर्जा हो । नभए कर्जा बोझ हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । वर्तमान अवस्थामा आफूले नगरी […]
गभर्नर डा. नेपाल भन्छन्– निक्षेप संकलनमा बैंकहरुको मनोमानी नियालिरहेका छौँ
पछिल्लो बैंकहरुको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा बढेको छ । यसलाई हामीले सार्है राम्रो संकेतका रुपमा बुझेका छैनौँ । वाणिज्य बैंकको लगानी अलि गलत बाटोतिर पो गएको हो कि भन्ने हाम्रो बुझाई हो । मैले बारम्बार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यक्रममा भन्ने गरेको छु कि बैंक तथा वित्तीय संस्था कुनै व्यक्तिको बिजनेस हाउस होइन । यस्ता संस्था […]